Sorona Masina ny 29/11/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 29/11/2021
Jer. 31, 10 ; Iz. 35, 4
Henoy ny tenin’ny Tompo, ry firenena, ary torio any amin’ny fara vazan-tany hoe: Aza mitebiteby intsony fa ho avy ny Mpanavotra antsika.
Mihanta aminao izahay, ry Tompo Andriamanitray, ataovy marisika tsara miandry ny fiavian’i Kristy Zanakao, ka rahefa ho tonga handòm-baravarana Izy, dia ho tratrany mivavaka izahay miandry Azy ary mientan-karavoana mihira sy midera Azy.
Raha taona A dia azo soloina ny atsy aoriana itý.
Iz. 2, 1-5
Angonin’ny Tompo hiadana mandrakizay eo amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny firenena rehetra.
Teny hitan’i Izaia, zanak’i Amôsa momba an’i Jodà sy i Jerosalema. Izao no ho tonga any amin’ny andro farany: Ny tendrombohitry ny tranon’ny Tompo, hatao eo an-tampon-tendrombohitra; sy hasandratra eo ambonin’ny havoana. Ary ny firenena rehetra hirohotra ho any aminy, ary firenena maro no ho avy hilaza hoe: “Andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, any an-tranon’ny Andriamanitr’i Jakôba; hampianatra antsika ny lalany Izy, ary hizotra amin’ny lalany isika.” Fa avy any Siôna no hivoahan’ny lalàna, ary avy any Jerosalema no hivoahan’ny tenin’ny Tompo. Ho mpanelanelana amin’ny vahoaka Izy, ary ho mpitsara ny firenena maro. Ny sabany hotefeny ho lela fangadin’omby, ary ny lefony ho antsy fijinjana. Ny firenena tsy hisy hanangan-tsabatra hamely ny firenena hafa, ary tsy hianatra ady intsony ny olona. Avia, ry taranak’i Jakôba, ka aoka handeha amin’ny fahazavan’ny Tompo isika.
Na: (taona A)
Iz. 4, 2-6
Ho rehareha amam-boninahitra ho an’ireo sisan’i Israely afaka ny Mesia.
Amin’izany andro izany, ny Solofon’ny Tompo ho haingo amam-boninahitra, ary ny Vokatry ny tany ho rehareha amam-piravaka, ho an’ireo sisan’i Israely afaka. Ka izay ho tafajanona ao Siôna, sy izay ho voatsimbina ao Jerosalema hantsoina hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ao Jerosalema mba ho an’ny fiainana. Rahefa voasasan’ny Tompo ny loton’ny zanakavavin’i Siôna, ka voadiony i Jerosalema amin’ny ra izay eo afovoany, amin’ny fanahin’ny fitsarana amam-panahin’ny fandringanana, amin’izay dia hoforonin’ny Tompo eran’ny tendrombohitra Siôna manontolo, sy eo ambonin’ny fivoriany, ny rahona aman-tsetroka anankiray mandritra ny andro, ary fahazavan’ny afo midedadeda amin’ny alina. Eo ambonin’ny voninahiny rehetra dia hisy elo: fa hisy lay mba hanalokaloka, amin’ny fidaindainan’ny andro, ary ho fandosirana sy fialofana amin’ny ranonorambaratra sy ny ranonorana.
Salamo 121, 1-3. 4-5. 6-7. 8-9
Fiv.: Faly aho nilazana hoe: Andeha isika ho any an-tranon’ny Tompo.
Hafaliana no nanenika ny tenako rehetra, nilazana fa hizotra ho any an-tranon’Izy Tompo. Indro tonga soa ’zahay tapitr’eto re ny dia, eto am-bavahadinao, ry Siôna tsara rindra.
Ao no miakatra ireo foko, dia ny fokon’Izy Tompo! Ao ny Anaran’Izy Tompo no derain’i Israely. Fiketraham-pitsarana no mijoro anatiny ao, ary miorina ao anivony ao ny tranon’i Davida.
Angataho, italahoy fiadanana i Siôna. Fanambinana e, mba ho amin’ny olon-tia anao rehetra. Fiadanana e, mba honina ao anaty mandanao! ka hanjaka lalandava ao anaty rovanao.
Noho ireo sakaiza maro sy ireo havako rehetra, aoka aho hilaza hoe: Fiadanana ho anao! Noho ny tranon’Izy Tompo dia ’lay Andriamanitray, tiako indrindra, ry Siôna, ny mba hiadananao.
Ny Tompo no mpitsara antsika, ny Tompo no Mpanjakantsika. Izy no hamonjy antsika.
Mt. 8, 5-11
Maro ny avy any Atsinanana sy ny avy any Andrefana no ho any amin’ny Fanjakan’ny lanitra.
Tamin’izany andro izany, rahefa niditra tao Kafarnaôma i Jesoa, dia nisy kapiteny anankiray nanatona Azy ka nihanta taminy nanao hoe: “Tompo ô, marary malemy mandry any an-trano ny ankizilahiko, sady mijaly mafy dia mafy.” Ary hoy i Jesoa taminy: “Ho avy hanasitrana azy Aho.” Fa namaly ilay kapiteny nanao hoe: “Tompoko, tsy mba mendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho, fa manonòna teny iray ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa na dia olom-pehezina aza aho, mba mifehy miaramila ihany koa, ka raha lazaiko amin’ny iray hoe: Andeha ianao, dia mandeha izy; ary amin’ny anankiray: Avia ianao, dia avy izy, ary amin’ny ankiziko: Ataovy izao, dia manao izy.” Gaga i Jesoa nony nandre izany, ka hoy Izy tamin’izay nanaraka Azy: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany Aho tamin’i Israely. Ary izany koa no ilazako aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy avy any Andrefana no hipetraka hiara-mihinana amin’ny fihinanam-be miaraka amin’i Abrahama sy i Isaaka, ary i Jakôba any amin’ny Fanjakan’ny lanitra.”
Mihanta aminao izahay, ry Tompo: raiso ny fanatitray nofantenana tamin’ny zava-tsoa avy aminao, ka enga anie ny vavakay mba hahasoa anay etý an-tany no sady hampahazo ny fanavotana mandrakizay.
Salamo 105, 4-5 ; Izaia 38, 3
Avia, ry Tompo, vangio izahay; itondrao fiadanana, dia hifaly tanteraka eo anatrehanao.
Mihanta aminao izahay, ry Tompo; enga anie hahasoa anay ny mistery nankalazainay fa namboarinao dieny izao ho anay mivahiny eo anivon’ny zava-mandalo mba hankafizinay ny zavatry ny lanitra ary hifikiranay amin’ny harena maharitra.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.6075 s.] - Hanohana anay